Dawladda cusub waxa hoggaamin doona, Askari wax bartay, waayo arag ah, dhaqanka iyo siyaasada bulshadana si dhow ula socda, oo jabhadeeyey. Waa Qalinkii Eng-Dacar Jama
Monday November 27, 2017 - 23:43:48 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
Dawladda cusub waxa hoggaamin doona, Askari wax bartay, waayo arag ah, dhaqanka iyo siyaasada bulshadana si dhow ula socda, oo jabhadeeyey. Waa Qalinkii Eng-Dacar Jama Dawladda cusub waxa hoggaamin doona, Askari wax bartay, waayo arag ah, dhaqanka iyo siyaasada bulshadana si dhow ula socda, oo jabhadeeyey. Inkastoo aannu magacaabin Xukuumaddiisii, wax badanina ku xidhmayaan, marka la doonayo in la saadaal-sawiro sida wax noqon karaan, haddana filashada shacabku ka qabaan xukuumadda cusub waa mid buuraan! Sababta filashada abuuraysaa waa hindisaha, muuqaal-hoggaamineedka, barnaamij ka xisbigiisa iyo hadalada hoggaamiyaha la doortay!
Muuse Biixi waxa uu dhawr jeer jeediyey hadalo kor u soo qaadaya yididiilada iyo yuhuun-siyaasadeedka shacabka Somaliland guud ahaan, gaar ahaan Xisbiga Kulmiye iyo geyiileyaashii taageeray ee u codeeyey. Waa Hoggaamiye lagu bartay go'aan aan xagal daacin intii uu ku soo dhex jirey kaalmaha shacabka looga adeego, hadday tahay xiliyadii ciidamada, jabhadnimadii, waayihii Ururkii SNM iyo wakhtiyadii Siyaasada xisbiyada badan la balaysimay ee Somaliland laga bilaabay.
Waa hoggaamiye si wayn loogu tuhmayo, go'aan aan leexleexan, kuna salaysan. Sharciga oo sarreeyaa, Cadaalad, shaqo abuur iyo xolaha ummada oo si dhab ah loo ilaaliyo. Amuurahan kor ku xusan ee aynu filaynaa dhamaan waa aas aaskii nolosha hagaagsan, wayna isku wada xidhanyihiin. Haddaba arrimahan waxa lala beegsan karaa, albaabadana u furi karta iyadoo Madaxwayne talaabooyinkan fud-fudud ugu horaynba aad qaado.
1. Go'aanka xulashada dadkii la shaqayn lahaa si cad oo daacad ah.
2. Taariikhda dalalka heerkan ka dhaqaaqay iyo Sidii ay hore ugu socdeen oo wax laga barto.
3. Dhallinarada oo laga shaqaysiiyo, lagana faa'iidaysto aqoontooda iyo awoododa. 4. Qofka iyo shaqada oo laysku beego Intaas baan fure iyo ibo-fur u arkaa, allena haku guuleeyo mudane Madaxwayne. Allahayoow nin daacad ah Allahayoow nin daalin'a Deeqdaada haw simin.
Waa Qalinkii Eng-Dacar Jama Tell: 4456982